Gazety maneran-tany - Taom-baovao manokana - Ny volana martsa
Home » About us » Newsletters » World News Newsletter - Taom-baovao manokana
World News Newsletter - Taom-baovao manokana
01 / 01 / 2020 01 / 01 / 2020 ny Antonio Gancedo
Ity bulletin "Vaovao ho an'ny Taom-baovao" ity dia mampiseho amin'ny pejy iray ny famintinana ireo hetsika rehetra natao. Inona no mahatsara an'izany raha ny manome fidirana amin'ireo bala efa navoaka.
Hasehontsika ny Bulletins navoaka tamin'ny taona 2019, natambatra hatramin'ny farany ka hatramin'ny voalohany ary mivondrona ho fizarana 5 amin'ny bala telo tsirairay.
Manatrika ny fangatahana ny vaovao izay angatahina izahay mba hahafahana miditra am-pitandremana mora foana ny hetsika rehetra nitranga nandritra ny volana martsa.
1 Gazety maneran-tany 15, 14 sy 13
2 Gazety maneran-tany 12, 11 sy 10
3 Gazety maneran-tany 9, 8 sy 7
4 Gazety maneran-tany 6, 5 sy 4
5 Gazety maneran-tany 3, 2 sy 1
Gazety maneran-tany 15, 14 sy 13
Ao amin'ny Bulletin laharana faha-15 dia tonga amin'ny faran'ny taona isika, any Arzantina ireo mpivarotra. Any izy ity, ao amin'ny Punta de Vacas Study and Refleksyon Refres any Mendoza dia hanao veloma amin'ny Taona izy ireo.
Ao amin'ny Bulletin laharana faha-14 dia manolotra fihetsika izay andraisan'ny Martsa an'ny International Base Team isika mandritra ny hanohizany ny fitsangatsian'izy ireo an'i Amerika ary ny hetsika sasany izay atao any amin'ny firenena maro.
Ao amin'ny Bulletin laharana faha-13 dia mitohy ny asan'ny Team Team amin'ny andiany faha-2 amin'ny volana martsa. Avy tany El Salvador izy no nankany Honduras, avy tao nankany Cota Rica. Nankany Panama izy avy eo.
Ny sasany amin'ireo hetsika natao tany amin'ireo toerana lavitra ny Ekipa Base no haseho. Raha ny momba ny volana martsa eo amoron'ny ranomasina dia ho hitantsika fa nanao ireo fizarana farany izy.
Gazety maneran-tany - Nomery 15
Gazety maneran-tany - Nomery 14
Gazety maneran-tany - Nomery 13
Gazety maneran-tany 12, 11 sy 10
Ao amin'ny Bulletin laharana faha-12 dia ho hitantsika fa tonga any Amerika ny ekipa fototry ny andiany faha-2 ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fanoloran-tena. Tany Mexico, nanohy ny asany izy ireo. Ho hitantsika ihany koa fa ny asa dia atao amin'ny faritra rehetra amin'ny planeta.
Ao amin'ny Bulletin laharana faha-11, dia hiatrika ireo hetsika notanterahina tamin'ny hetsika Mar de Paz Maditerondro, nanomboka hatry ny ela ka tonga tany Barcelona izay nisy ny fivoriana tao amin'ny Peace Boat of the Hibakushas, ​​Japoney tafavoaka tamin'ny Hiroshima Bombs sy Nagasaki, sambo sambo milamina ao Barcelona.
Ao amin'ny Bulletin laharana faha-10: ao amin'ireo lahatsoratra naseho amin'ity bulletin ity dia mitohy any Afrika ny Team Team of the World March in Africa, dia any Senegal, efa manomboka ny andrana "Ranomasimbe Mediteraneana" amin'ny faritra hafa. Planeta daholo ny zava-drehetra.
Gazety maneran-tany - Nomery 12
Gazety maneran-tany - Nomery 11
Gazety maneran-tany - Nomery 10
Gazety maneran-tany 9, 8 sy 7
Tao amin'ny Bulletin laharana faha-9, ny volana martsa faha-2, dia nandositra niala ny Nosy Canary izy, rehefa avy niantsona tao Nouakchott, dia nanohy ny diany namakivaky ny kaontinanta afrikanina.
Ao amin'ny Bulletin number 8, ny March World faharoa dia manohy ny lalany mankany amin'ny kaontinanta afrikanina ary, amin'ny ambiny planeta, ny tohin'ny martsa dia mitohy amin'ny hetsika marobe. Ity gazety ity dia mampiseho ny fiovan'ny asa ataontsika.
Ao amin'ny Bulletin laharana faha-7, ny World March 2 dia mitsambikina any Afrika, ho hitantsika ny lalana mandalo ao Maraoka, ary aorian'ny sidina mankany amin'ny Nosy Canary, ny hetsika any amin'ireo "nosy vintana."
Gazety maneran-tany - Nomery 9
Gazety maneran-tany - Nomery 8
Gazety maneran-tany - Nomery 7
Gazety maneran-tany 6, 5 sy 4
Tao amin'ny Bulletin laharana faha-6, ny volana martsa faha-2, dia nandositra niala ny Nosy Canary izy, rehefa avy niantsona tao Nouakchott, dia nanohy ny diany namakivaky ny kaontinanta afrikanina.
Ao amin'ny Bulletin number 5, ny March World faharoa dia manohy ny lalany mankany amin'ny kaontinanta afrikanina ary, amin'ny ambiny planeta, ny tohin'ny martsa dia mitohy amin'ny hetsika marobe. Ity gazety ity dia mampiseho ny fiovan'ny asa ataontsika.
Ao amin'ny Bulletin laharana faha-4, ny World March 2 dia mitsambikina any Afrika, ho hitantsika ny lalana mandalo ao Maraoka, ary aorian'ny sidina mankany amin'ny Nosy Canary, ny hetsika any amin'ireo "nosy vintana."
Gazety maneran-tany - Nomery 6
Gazety maneran-tany - Nomery 5
Gazety maneran-tany - Nomery 4
Gazety maneran-tany 3, 2 sy 1
Ao amin'ny Bulletin laharana faha-3 dia aseho ny lahatsoratra voasoratra ao amin'ny tranokalan'ny World March II, nanomboka ny 23 aogositra 2019 ka hatramin'ny 15 septambra 2019.
Ao amin'ny Bulletin number 2 dia ahitanao ireo lahatsoratra tafiditra ao amin'ny tranokalan'ny World March II, nanomboka ny Jona 2019 ka hatramin'ny 22 Aogositra 2019.
Ao amin'ny Bulletin laharana faha-1 dia afaka mahita ny fampahalalana famintinana momba ny fihaonana maneran-tany tamin'ny Martsa Faharoa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriampahalemana isika.
Gazety maneran-tany - Nomery 3
Gazety maneran-tany - Nomery 2
Gazety maneran-tany - Nomery 1
Fankasitrahana tsotra sy misy heviny an'i Silo
Ny Fiterahana ao amin'ny fiangonan'ny mpifankatia